असोज २ गतेबाट अधिकमास शुरु हुदै, के गर्न हुन्छ के हुदैन ? (पौराणिक कथा सहित) - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
असोज २ गतेबाट अधिकमास शुरु हुदै, के गर्न हुन्छ के हुदैन ? (पौराणिक कथा सहित)
२०७७ असाेज २ गतेवाट अधिकमास सुरु हुदैछ तथा अधिकमासलाई पुरुषोत्तममास भनेर पनि भनिन्छ । अधिकमासलाइ कसरि गणना गरिन्छ ? ३६५ दिनको एक वर्ष वा १२ महिना हुन्छ ।
सूयको गतिअनुसार गणना गरिने मासलाई ९ महिना सौरमास भनिन्छ भने, चन्द्रमासको गतिको आधारमा गणना गरिने मासलाई चन्द्रमास भनिन्छ । सामान्यतया सैरमासमा संक्रान्ति देखि मसान्तसम्ममा २९ दिनदेखि ३२ दिनसम्मको एक पहिना हुन्छ भने चन्द्रमासमा एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्म २९ दिन १२ घण्टा ४४ मिनेट र २४ सेकेन्डको एक चन्द्रमास हुन्छ ।
त्यस्तै सौरमासको गणनाअनुसार एक वर्षमा जम्मा ३६५ दिन हुछन् भने, चन्द्रमास अनुसार दिन गणना ३५४ दिन मात्र हुन्छ । सौरमासभन्दा चन्द्रमासको दिन गणनाअनुसार ११ दिन बढी वर्षमा हुने गर्दछ । यसरी गणना गर्दा ३२ महिना, १६ दिन, १ घण्टा र ३६ मिनेट पुगेपछि एक अधिकमासबाट अर्को अधिकमास पर्दछ वा आउँछ । यस क्रमले हरेक वर्षमा ११ दिनको फरकलाई जोड्दै जाँदा तीन वर्षमा एक महिना सौरमास भन्दा चन्द्रमास वढि हुन पुग्छ ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार अधिकमास भन्नाले जुन चन्द्रमासभित्र सूर्य संक्रान्ति पर्दैन त्यसलाई भनिन्छ । त्यस्तै जुन चन्द्रमासभित्र २ वटा सूर्य संक्रान्ति पर्दछ, त्यसलाई क्षयमास भनिन्छ । अधिकमास हरेक ३२ महिना १६ दिन १ घण्टा, ३६ मिनेटपछि आउँछ भने क्षयमास घटीमा १९ वर्ष र बढिमा ४१ वर्षमा एक पटक आउने गर्दछ । यस्ता ग्रहगत अधिकमास र क्षयमासका समय समायोजन गर्ने कार्यहरूमा अन्न विभिन्न स्थानमा बेग्ला बेग्लै विधि र किसिम पनि पाईन्छ ।
यसै सौरमास र चन्द्रमासलाई तीन वर्षमा समायोजन गरिने हुदा यस अवधिलाई अधिकमास भनेर भनिएको हो । सौरमास जब सूर्य–चन्द्रमाको गतिमा आधारित हुने र चान्द्रमास तिथिमा आश्रित हुने भएकाले सौर्यमास जस्तो चान्द्रमास सामान्यतय गतिमा निश्चित हुदैन । यहि नियम अनुसार अधिकमास वा महिना बृद्धि हुने हुन्छ ।
अधिकमास खासै यहि महिनामा हुन्छ भनेर हुदैन । चान्द्रमासको गति अनुसार जुनसुकै महिनामा पनि पर्न सक्छ । “सर्वेषु मासेष्वधिमासकः स्यात” भन्ने प्रमाणबाट अधिक मास जुनसुकै महिनामा पनि पर्न सक्छ । अधिकमासमा भगवान नारायणको पूजा गरिने र अधिकमासमा माहात्म्य वा कथा सुन्ने र दान गर्ने परम्परा रहेको छ । यसो गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन भनेर कथामा बताईएको छ ।
अधिकमासमा जन्म वा मृत्यु भएमा के गर्ने ?
१‍ वार्षिकी कार्य
२ दैनिक नित्य कर्म सधै गरेर ल्याइएका कर्म जस्तो दैनिक विहान बेलुकाको पूजा ।
३ पुरुषोत्तम पूजा कथा श्रवण
१ श्राद्ध तथा पितृकर्म
२ विवाह व्रतवन्ध, चूडाकर्म
३ सप्ताह, नवाह, महारुद्रि, शतचण्डी
४ शुभ मूर्हुतका कुनै पनि कर्म गर्नु हुदैन जस्तो गृह प्रवेश , नयाँ कार्यको थालनी , यात्रा, कार्यको शुभारम्भ गर्न अशुभ मानिन्छ ।
५ अधिक मासमा विवाह गरेमा गृह सुख हुदैन
६ गर्भाधान गरेमा बच्चा रोगी जन्मन्छ ।
७ नव विवाहित दाम्पत्तीहरूकालागि अधिक मासमा अलग बस्नु राम्रो हुन्छ ।
अधिकमासमा दानकाे महत्व तथा कथा ।
यसकारण हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा अधिक मासलाई निकै पवित्र मानिएको छ । भगवान् कृष्ण अर्थात् विष्णुको महिना भएकाले यो महिनामा गरिने व्रत पारायण, पवित्र नदीस्नान एवं तीर्थयात्राबाट सार्है ठूलो पुण्य प्राप्त हुने कुरा शास्त्रहरूमा बताइएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, भदौ २७ २०७७ २०:३१:१३